Aqoon isweydaarsi looga hadlayey qoondada haweenka ee siyaasadda dalka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Aqoon isweydaarsi looga hadlayey qoondada haweenka ee siyaasadda dalka oo maanta lagu...
Aqoon isweydaarsi looga hadlayey qoondada haweenka ee siyaasadda dalka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Xarunta Cilmi barista iyo hormarinta aadanaha ayaa muqdisho ka furtay tababar ku saabsan xaqiijinta qoontada haweenka ay leeyihiin labada aqal ee barlamaanka.
Aqoon isweydaarsigaan ayay Xarunta Cilmi barista iyo hormarinta aadanaha ugu talagashay xoojinta qoontada loo asteeyay haweenka oo ah boqolkiiba sodon oo ay ku leeyahay labada qalka ee barlamaanka Federaalka Soomaaliya waxaana ka qeyb-galay xildhibaano,Culumaa’udiin,bulshada Rayidka iyo masuuliyiinta xarunta.
Agaasimaha Xarunta Cilmi barista iyo hormarinta aadanaha Luul Salaad Ibraahim ayaa ka sheekeysay waxa loo qabtay kulamadaamn iyo heerarka ay soo mareeyn.
Nabadoon Cabduqaadir Xarago iyo Sheekh Cali Jawiis ayaa ku booriyay in kaliya haweenka loogu baahanayahay inay dhowraan sida diintu ugu ogoshahay iyagoo raacaya tilmaamaha saxda ee haweenka loo ogolyahay.
Guddoomiyaha guddiga madaxa banana ee doorashoyinka qaranka iyo senator Samsam daahir Maxamed ayaa sheegay in cilada haweenka ay tahay inaan la tijaabin haweenka cilmiga u hogaaminta balse sanadaan dambey isbedel laga dareemayo.
Previous articleJadwalka doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Hirshabeelle oo la soo saaray.
Next articleMasuuliyiin ka tirsan Koofur Galbeed oo Baydhabo ku soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo wasiirka dastuurka XFS.